रामकुमारी झाँक्रीको संयोग- श्रीमती मन्त्री, श्रीमान उपसचिव - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
असोज २३ सरकार गठनको झन्डै ३ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रीमण्डल पुरा गरेका छन्।
काँग्रेसका दुई र नेकपा माओबादी केन्द्रका २ मन्त्रीको साथमा लामो समय देशको बागडोर सम्हालेका प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो टिममा केहि आशा लाग्दा र चर्चित अनुहारलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुरा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टी सचिब रामकुमारी झाँक्रीलाई शहरी बिकाश मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिएका छन्।
. रामकुमारी झाँक्री अस्पताल भर्ना
. जन्मेको माटोले बोलायो, अब गुल्मीबाटै चुनाव जितेर सासंद बन्छुः रामकुमारी झाँक्री
. मन्‍त्री झाँक्रीको दावी : नेकपा एमाले विस्तारै बिलाएर जान्छ
. नौ जना नेताहरु केपी ओलीको टाङमुनि छिर्छन् भन्ने थाहा थियोः रामकुमारी झाँक्री
. ओलीले गरेको सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्छ : झाँक्री
२०३४ सालमा गुल्मी जिल्लामा जन्मिएकी झाँक्री नेपालको समकालीन महिला नेत्रीहरु मध्य निडर, हकी आँटिलो स्वाभाव भएकी नेता हुन। २०६५ सालमा नेकपा एमालेको बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सम्हाल्दै गर्दा अखिलको ईतिहाँसमा पहिलो महिला अध्यक्षको रेकर्ड समेत राखेकी छिन्।
२०६१ सालमा राजाले सैनिक कुमार्फत सत्ता हातमा लिँदा उनी सडकमा निस्किइन् । त्यो समय राजतन्त्रको विरुद्धमा बोल्न मुस्किल थियो र चूनौतीपूर्ण । राजतन्त्र विरोधी मोर्चा सुरुमा युवा र विद्यार्थीले नै सम्हाले।
त्यो मोर्चाको अग्रस्थानमा थिइन् झाक्री। पुलीसको निर्मम लठ्ठी झाक्रीको टाउकोमा बज्रियो । टाउको फुट्यो। रगतको धारो बगाइन्,झाक्रीले राजतन्त्र फाल्नकै निम्ति । र गणतन्त्र प्राप्ति पछि उनी प्रतिनिधिसभामा रामकुमारी झाँक्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको समानुपातिक तर्फबाट सांसद् थिइन्।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, असोज २४ २०७८ २०:०६:३०
Tags :रामकुमारी झाँक्री